Ganaax weyn Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Volotea ciqaabta Rakaabka naafada ah iyo carruurta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Ganaax weyn Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Volotea ciqaabta Rakaabka naafada ah iyo carruurta
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Wararka kala duwan
Ganaaxa Maamulka Duulista
Ka dib markii ay ku soo rogeen ganaax dhan 35,000 euro Ryanair, Wizz Air, easyJet, iyo Volotea, diyaaradahani waxay ku sii jiri doonaan indho-indhaynta weligeed ah ee Hay'adda Duulista Rayidka Talyaaniga (ENAC).
Sida laga soo xigtay ENAC, diyaaradahan qiimaha jaban waxay sii wadaan inay lacag dheeraad ah ka qaadaan kuwa la socda carruurta ama naafada ah.
Tallaabo degdeg ah ayaa dhaqan gashay Ogosto 15, 2021, taas oo ka hortagtay qarashka dheeraadka ah ee kuraasta in la wada joogo.
EasyJet ayaa isla markiiba ka jawaabtay iyada oo sheegtay in eedeynta iyo ganaaxa aysan sal lahayn.
Shirkadaha duulimaadyada ee jaban, sida uu qabo ENAC, waxay dambiileyaal yihiin “sii wadista inay ka qaadaan kharashyada dheeraadka ah ee qoondaynta kuraasta u dhow daryeelayaasha carruurta aan qaangaarin iyo kuwa naafada ah.”
"Laga soo bilaabo jeegaggii ugu horreeyay ee la sameeyay," ENAC waxaa la xusay, in shirkadahan “ay dib u dhigeen: wali ma aysan bixin, sida uu qoray oo uu xaqiijiyay garsooraha maamulka, waxay beddeleen IT -ga iyo nidaamyada hawlgalka, iyo waqtiga ballansashada, waxay sii wadaan inay codsadaan kaabis ku saabsan qiimaha tigidhka hawada meelaynta kuraasta u dhow daryeelayaasha dadka aan qaangaarin iyo dadka naafada ah, marka laga reebo, haddii loo baahdo, magdhaw. ”
Sababtan awgeed, Hay'addu “waxay bilowday hannaankii lagu soo rogi lahaa cunaqabatayn” 3 -da shirkadood. Ganaaxa-sida ay soo warisay Corriere della Sera-waxay noqon doontaa "mid u dhiganta fulin la'aanta" iyo "waxay u dhexayn kartaa ugu yaraan 10,000 euro illaa ugu badnaan 50,000 oo ah khilaaf kasta."
Qoondaynta bilaashka ah ee kuraasta carruurta aan qaangaarin iyo dadka dhaqdhaqaaqoodu hoos u dhacay ee ku dhow waalidkood iyo/ama daryeelayaashooda waxaa damaanad qaaday tallaabo degdeg ah oo ay soo saartay ENAC waxayna shaqaynaysay ilaa Ogosto 15, 2021.
EasyJet isla markiiba wuxuu ku jawaabay bayaan, isagoo xaqiijinaya "inay si buuxda u fulisay qawaaniinta jira iyo in bilowga hannaanka lagu soo rogayo cunaqabataynta gabi ahaanba waa mid aan sal lahayn."
Shirkadda, wuxuu xusuustaa, "si wadajir ah ugu qoondeeya kuraasta qoysaska, taas oo macnaheedu yahay in carruurta ka yar 12 iyo dadka dhaqdhaqaaqoodu hooseeyo ay ag fadhiyaan qof weyn oo la socda oo aan lahayn kharash dheeraad ah."
Mas'uuliyiintu waxay ku soo rogeen baabi'inta lacagta dheeraadka ah ee rakaabkan July 17, 2021. Kadibna TAR waxay dib u dhigtay dhaqan galinta cabirka illaa iyo wixii ka dambeeya Ogosto 15. qofka aan qaangaarin ama naafada ah ee la socda ayaa weli laga qaadayaa kaalmada dheeraadka ah.